सल्यानमा अझै हटेन खलोप्रथा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सल्यानमा अझै हटेन खलोप्रथा
सल्यानमा अझै हटेन खलोप्रथा
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार March 13, 2018	0 57 Views
सल्यान  । जिल्लाका ग्रामीण क्षे त्रमा अझै पनि खलो (बालीघरे ) प्रथा कायमै रहे को पाइएको छ । पुर्खादे खि गर्दै आइरहे को पे शालाई एकै पटक चटक्क माया मार्न नसक्दा जिल्लाका ग्रामीण क्षे त्रमा अझै पनि खलो प्रथाले प्रश्रय पाइरहे को हो  ।
वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं. ८ ज्यामिरे का हर्कबहादुर विकले आरन चलाउन थाले को झण्डै २० वर्ष जति भयो  । उनले अहिले सम्म नगदमा कारो वार गरे का छै नन् । पाच जनाको परिवारलाई उनले खलो बाट आएको अन्नपातबाटै पाल्दै आइरहे का छन् । पुर्खाले गरिआएको पे शा भएकाले एकै पटक छो ड्न गाह्रो भएको विकको भनाइ छ ।
यस् तै वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं. ४ च्यूराका खिमलाल दमाईले गाउघरमा कपडा सिलाउन थाले को झण्डै ३० वर्ष भयो  । परम्परागत पे शा अगाल्दा पश्चाताप नलागे को उल्ले ख गदैर् ै दमाईले धे रै मानिसका कपडा सिलाउन पाउदा गर्व लाग्ने बताउनुभयो  । ‘उहाले भन्नुभयो – ‘परिवार हे रे र पा“च पाथीदे खि दुई मुरीसम्म वर्षमा अन्नपात उठाउदै आइरहे को छु । वर्षभरि एक सय भन्दा बढी घरधुरीका कपडा सिलाउदै आइरहे को छु ।’
मूलखो ला–५ कै भद्रबहादुर कामीले आरनको काम गर्न थाले को २४ वर्ष भयो  । हर्कबहादुर झै ं कामीले पनि गाउ“मा भएका सबै फलामे औ जार पु¥याउने र औ जार बनाएअनुसार अन्नपात लिने गर्दछन् । खलो प्रथाबाट घरपरिवार पाल्न समस् या भए पनि पुर्खादे खि चलिआएको चलन छो ड्न गाह्रो भएको उहा“को भनाइ छ ।
Previous: सल्यानमा अझै हटेन खलोप्रथा
Next: ग्याँस फिलिङ र वितरण डिलरबाट मात्रै